Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika mu Libya yaramba mashoko ekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi zvichibhadharwa kuti zviuraye vanhu vari kuratidzira kusafara nehutongi hwava Muammar Gadaffi
Kukadzi 25, 2011
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika mu Libya yaramba mashoko ekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi zvichibhadharwa kuti zviuraye vanhu vari kuratidzira kusafara nehutongi hwava Muammar Gadaffi.
VaFaraj Najem vanodzidzisa pa Grafton College of Management and Science kuBritain, vanoti pari zvino vanhu vari kushandiswa mumabasa akadai vanobva kuChad, Guinea, Niger neMuritania.
Va Najem vanoti kana VaGadaffi vakabviswa pachigaro, vangangopotera kuzimbabwe nekuti dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa nedzimwe, dzine hutongi hwejekerere. Nyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingadaro zvakaendeswa ku Libya, yakazeiwa mudare reparamende svondo rino, apo dare iri rakabvunza gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Va Emmerson Mnangagwa, kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu.
Patience Rusere weStudio7 aita hurukuro na chief weMDC muparamende, VaInnocent Gonese, kuti tinzwe mafambiro akaita nyaya iyi mudare.
Hurukuro naVaInnocent Gonese